eNasha.com - समाज सेवा र विचरा हाम्रा कलाकार
समाज सेवा र विचरा हाम्रा कलाकार
हाम्रा कलाकारहरु मनकारी छन् । तिनलाई सानो घटनाले पनि मन छुन्छ । त्यसैले उनीहरु समाजमा सानो काम गर्न पनि हरदम उत्साहित हुन्छन् । चाहे वृक्षारोपण अभियानमा सहभागी भएर होस् या कुनै विरामी व्यक्तिलाई सहयोग-कर्न्र्सटमा भाग लिएर होस्, उनीहरु उत्तिनै बेला तम्तयार हुन्छन् ।
गएको शनिबारकै कुरा गर्नुस्न ! द एक्स ब्याण्डले उत्पीडित महिला उत्थान तथा परामर्श केन्द्र (आरसीसीओडब्लु) ले एक वचनमा गरेको अनुरोधलाई तुरुन्त स्वीकार मात्र गरेन, छोटो समयमा नै कर्न्र्सटलाई सफल पारेरै छाडे । "उहाँले राम्रो कारण लिएर आउनु भयो, हामीलाई पनि समाजसेवामा रुचि थियो । त्यसैले कार्यक्रम गर्‍यौँ", द एक्स ब्याण्डका सरोजले इनशाडटकमलाई बताए । "धेरै वर्षबित्यो सङ्गीतमा । पैसाकै लागि मात्र कति गाउने ? के समाज प्रति हाम्रो दायित्व छैन र !" द एक्स ब्याण्डका सुरेन्द्रले भने- "१४ वर्षसम्म व्यवसायिक रुपमा गरियो, आखिर कति जति कमाए पनि नपुग्दो रहेछ !" त्यसैले १५ बालबालिकाका लागि खाद्य तथा लता कपडा व्यवस्था गर्न खडा भएको यो संस्थाको पैसा समेत दिने प्रस्तावलाई उनीहरुले अस्वीकार गरे ।
आफूले समाजका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर एक्स ब्याण्डले जस्तै सोच्नेहरुको लामो सूचि हुनसक्छ । एउटा दुइटा उदाहरण यहाँ थपिहालौँ- गायक रामचन्द्र काफ्लेले केही समयअघि हङ्कङ्मा साङ्गीतिक कार्यक्रम गरे । त्यो कार्यक्रममा आफूले सोचेभन्दा बढी पैसा कमाए । १५ हजार रुपियाँभन्दा बढी रकम उनले वृद्धाश्रमलाई लत्ता, कपडा तथा खाद्यसामाग्री किनेर बाँढे । गायक धीरज राईले मृगौला पीडित व्यक्तिका लागि एउटा कर्न्र्सट नै आयोजन गरेको खबर अखबारहरुमा तपाइँहरुले पनि पढ्नु भएको होला । स्थानीय स्कूलका लागि नेपालय तथा नेपथ्य समूहले हरेक वर्ष आयोजन गर्ने टूर कर्न्र्सटको त झन् कुरै नगरौँ ।
समाजसेवामा गतिलो रुचि हुँदाहुँदै पनि तर आफूले गरेको सहयोगको निकै दुरुपयोग भएको गुनासाहरु पनि उत्तिकै सुनिन्छन् । "हामी कहिलेकाहीँ ठगिन्छौँ । कसैको सहयोगका लागि कार्यक्रम गर्ने भनिन्छ, तर सहयोग पुग्नुपर्ने व्यक्तिसम्म सहयोग पुग्दैन । बीचका व्यक्तिहरुले फाइदा उठाइरहेका हुन्छन्", एक्स ब्याण्डका सुरेन्द्र निजी अनुभव बाँढ्दै भन्छन्- "केही अघि सुनसरी जिल्लाको तरहरामा एम्बुलेन्स किन्न एउटा कर्न्र्सटको आयोजना गरियो, तर त्यहाँ एम्बुलेन्स किनियो कि किनिएन, जनताले सुविधा पाए कि पाएनन् आदि कुरा हामीले थाहा पाउन सकेनौँ ।"
च्यारिटी शो भन्ने वित्तिकै सक्रिय हुने गायक सुदीप गिरीले न्यूनतम रकम लिएर केही अघिसम्म कार्यक्रममा गाइदिन्थे । तर पछि थाहा पाए कि त्यसरी गरिएको कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित संस्थासम्म नपुग्दो रहेछ । आफूले समाजसेवाका लागि भनेर गला सुकाउने तर पैसा चाहिँ त्यो संस्थासम्म नपुग्ने देखेपछि सुदीपले हिजोआज एउटा आइडिया निकालेका छन् । जुनसुकै सामाजिक संस्था वा सामाजिक कार्यका लागि आफ्नो पूरै पारिश्रमिक लिने र आएको पारिश्रमिकको आधा रकम कार्यक्रमकै दिन सबैका सामुन्ने हस्तान्तरण गर्ने । "यो गर्दा आफूले गरेको सहयोग अरुले पनि देख्ने, अरुलाई सहयोग गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्ने र त्यति गर्दा सन्तुष्टि पनि हुने हुँदोरहेछ", सुदीपले इनशाडटकमलाई बताए ।
तर बदमासहरु चाहिँ यस्तो उपाय सुनेपछि चाँडै साइड लाग्दा रहेछन् ! सुदीपकै अनुभव सुनौँ न- "एक दिन त्यस्तै प्रकारका केटाहरु आएर एउटा कर्न्र्सटमा गाइदिन अनुरोध गरे । मैले आफूले समाजसेवाको काममा पूरै रकम लिने गरेको बताएँ । तर कार्यक्रमको दिन पाएको रकमबाट आधा चाहिँ त्यसै दिन गाउँदागाउँदै दिएको घोषणा गर्ने गरेको छु पनि भनेँ । त्यसपछि उनीहरु जिल्लिए । गायकगायिकालाई पूरै रकम दिएको भनी ठगेर खान पल्किएका कतिपय आयोजकहरुले त्यसो गर्ने भनेपछि आउँदै आएनन् ।"
समाजसेवा गर्दा पनि ठगिने स्थिति आएपछि धेरै जसो गायकगायिकाहरु अधिकांश कार्यक्रममा आफ्नो मिहिनेतको मूल्य चाहिँ लिइहाल्छन् । ताकि समाजसेवा गर्ने गायकले पनि फोकटमा ठगिएको महसूस नगरुन् र सप्पै रकम सहयोग गर्न नसके पनि आधा रकम चाहिँ सहयोग गर्न भ्याइयो भन्ने सन्तुष्टी पनि सँगै पाइयोस् !
विचार रिलिज लुकेका कुरा क्या बात ! कीर्तिमान तातोपीरो गायिका प्रेम र विवाह रुचि कन्सर्ट सङ्गीतकार नेपाली तारा उपलब्धि हल्ला भिडन्त गीतकार पेज थ्री ट्रयाक बाहिर गायक समुद्रपार